Wararka Maanta: Axad, Sept 30, 2012-Bam lagu Weeraray Kaniisad ku taalla Deegaan ku dhow Xaafadda Islii ee Magaalada Nairoib oo khasaare nafeed geystay
Afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo, Charles Owino ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday goob ay caruurtu kaga sugnaayeen Kaniisadda, isagoo sheegay in booliisku ay ku jiraan baaritaanno ku saabsan sida uu qaraxan ku dhacay.
"Weerar ayaa lagu qaaday Kaniisadda St Polycarp's, caruur ayay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay," ayuu yiri Charles oo ah afhayeenkas u hadlay booliiska dalka Kenya.
Shacab Kenyan ah ayaa rabshado ka sameeyay xaafadda Islii oo ay Soomaalidu ku badan tahay, iyagoo ka careysan weerarka lagu qaaday kaniisadda, iyadoo ay taas keentay in ganacsiga Islii oo dhan la xiro.
"Waxaan uga shakisannahay weerarkan inay geysteen xubno ka tirsan Al-shabaab. Booliisku waxay xireen dhowr qof oo ay uga shakisan yihiin inay weerarkan lug ku lahaayeen," ayuu Owino oo saxaafadda Kenya la hadlayay.
Telefishinnada dalka Kenya ayaa laga arkay saddex qof oo Soomaali ah oo booliisku ay u qabteen qaraxa lagu weeraray Kaniisadda, iyadoo maanta ay tahay maalinta ay dadka masiixiyiinta ah ee Kenya tagaan Kaniisadaha si ay ugu cibaadeystaan.
Weerarkan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha dalak Soomaaliya ay qarka u saaran yihiin inay gudaha u galaan Kismaayo oo ah goob ay awood badan ku lahayd Al-shabaab.
Bishii July ee sannadkan ayaa waxaa weerarro lagu qaaday Kaniisado ku yaalla magaalada Gaarisa ee dalka Kenya waxaa ku dhintay 15-qof, iyadoo 66-qof oo kalena ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen.